Somaliland: “Taliyaha Xilkiisa Gudanaya Ee Sida Daacadnimada Ah Amniga Uga Shaqaynaya Xagxagshada Iyo Deelqaafka Ha Laga Daayo” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Taliyaha Xilkiisa Gudanaya Ee Sida Daacadnimada Ah Amniga Uga Shaqaynaya Xagxagshada...
“Waxba Yaanu Xoola I Siin, Xilana Ii Tarine, Xaashe Nin Libin Kaa Xistiyay Xumihi Waa Yaab” – W/Q: Ahmed Faarax
Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland, Sarreeye Guuto C/Laahi Fadal Iimaan, oo ka mid ah ragga ugu waaya aragnimada dheer leh dhinaca hawlaha ammaanka iyo shaqada ciidanka booliska, wuxuu sidoo noqday taliyihii ugu waxqabadka badnaa dhinaca tayaynta iyo horumarinta ciidanka booliska iyo shaqadooda la xidhiidha sugidda ammaanka caasimadda iyo guud ahaan magaalooyinka iyo degmooyinka dallka.
Waxaan ka warqabnaa dadaallada xoogga leh ee taliska boolisku ugu jiro waxka qabashada kooxaha dhalinyarada ah ee ku kaca fal danbiyeedada gudaha caasimadda oo in badan oo ka mid ah loo taxaabay jeelasha, in badanna uu ugu baaqay Taliyuhu waalidiinta iyo bulshada caasimadda inay xil iska saaraan ilaalinta anshaxa iyo dhaqamada ubadkooda. Ma arkayno ama ma muuqdaan wax gol daloolo ah oo haba yaraatee Taliyaha iyo guud ahaan ciidanka booliska loogu soo jeedin karo eedayn ama lagu dhaliili karno maanta marka aynu si daacad ah oo aan xumaan, xiqdi iyo nacayb shakhsiyeed ama nacayb wadan iyo nabadgelyo ku jirin u hadalno.
Haddaba waxa mid lala yaabo bulshada ku noqotay hadal ka soo yeedhay Xildhiban Cabdiqaadir Jirde ahna guddoomiyaha kumeelgaadhka ah ee xisbiga WADDANI kaasi oo uu ku durayo Taliye Fadal iyo ilaalinta ammaanka caasimadda ee ciidanka booliska. Xildhibaanku wuxu u hadlay si ka baxsan anshaxa wanaagsan iyo masuuliyadda saran qof muwaadin ah, waliba waxa uu si badheedh ah wax uga sheegay shakhsiyadda taliyaha oo uu ku sifeeyay inaanu xilkaas ku habboonayn.
Marka loo eego heerka uu ku socdo waxqabadka taliska ciidanka booliska Somaliland mudadii uu taliyaha booliska qaranka ahaa Taliye Fadal iyo horumarka ballaadhan ee la gaadhsiiyay ciidanka booliska haddii ay tahay xagga tababarada iyo kor u qaadida xirfadda ciidannimo ee bilayska, kor u qaadida tirada ciidanka bilayska iyo adeegooda oo maanta degmo kasta iyo tuulo kasta oo ka tirsan dalka ay ka jiraan, sida loo qaybiyay iyo sida loo dhaqangeliyay darajooyinkii ciidanka booliska ee la bixiyay oo aan laba ku wada hadal ama wax cabasho ahi meella ka iman iyo heeganka buuxa ee ciidanka booliska Somaliland ay saacad walba habeen iyo maalin ugu jiraan sugidda iyo ilaalinta ammaanka caasimadda, waxan hubaal ah in Taliye fadal iyo dhammaan hoggaannada , saraakiisha, madaxda iyo askarta daacadda ah ee ciidanka boolisku ka mudanyihiin shacabka oo dhan in la bogaadiyo doorkooda, lagu ammaano oo la garab istaago. Shacabka caasimadda ku dhaqan iyo muwaadiniinta jecel qaranimada iyo wadankoodu intaba iyo abaal ka badanba way u hayaan Taliye Fadal iyo ciidanka booliska Somaliland meelkasta oo ay joogaan dalka.
Haseyeeshee, waxa ayaan darro ah in Xildhibaan Cabdiqaadir Jirde ay isaga u muuqan waydo intaas oo wanaag iyo waxtar ah. Iyadoo arrintan aan uga hadlayno si wadaninimo iyo damiirkayga shakhsiyeed ku salaysan oo laga yaabo in xildhibaanka iyo taliyuhu isaga kay dhawyihiin, waxaan ku odhan lahaa Xildhibaan Obsiiye tuduca caan baxay ee gabaygii Abwaan Salaan Carrabay “Waxba yaanu xoola i siin, xilana ii tarine, xaashe nin libin kaa xistiyay xumihi waa yaab.”
Midda kale, waxa is waydiin mudan marka uu nin Xildhibaan weliba siyaasi ruug caddaa ahi uu sidan uga hadlayo arrimaha ammaanka wadanka, miyaanay u muuqan in hadalkiisu waxyeelo iyo meel ka dhac ku yahay ammaanka caasimadda iyo nabadgelyada ay Somaliland ku faanayso ee ah hantida ugu qaalisan ee qarankani leeyahay.
Ma gayaan taliyaha iyo ciidanka boolisku gefka iyo meel ka dhaca noocaas ah ee Taliyaha Xilkiisa Gudanaya ee Sida Daacadnimada ah Amniga uga shaqaynaya xagxagshada iyo deelqaafka ha laga daayo: